प्रतिष्ठानमा कन्टिनियस ब्लक एनेस्थेसिया प्रविधि - Goraksha Online
दाङ, २१ चैत । घोराही उपमहानगरपालिकाकी २४ वर्षीय शर्मिला (नाम परिवर्तन)को दुर्घटनाका कारण देव्रे हातको कुहिनाको हाड भाँचिएर चिराचिरा परेको थियो । उनको भाँचिएका कुहिनाका हाडका टुक्राहरु जोड्न कम्तिमा ४ घण्टा हातलाई बेहोस बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एनेस्थेसियाका चिकित्सकको टोलीले एउटा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग ग¥यो । सफल यो प्रविधिको प्रयोगले बिरामीको करिब ४ घण्टा लामो शल्यक्रिया सहजै रुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
एनेस्थेसियाका चिकित्सकले यसलाई कन्टिनियस ब्लक प्रविधिको एनेस्थेसिया भनेका छन् । यो प्रविधिमा घाँटीको नसाबाट पाखुरासम्म एनेस्थेसियाको औषधी पठाइयो । बेहोस पार्ने औषधीले जुनबेला काम गर्न छाडेको संकेत भिडिओग्राफले देखाउँछ, लगत्तै फेरि सोही नसाबाट अर्को डोज एनेस्थेसियाको औषधी दिइन्छ । शल्यक्रिया लम्बिँदै जाने अवस्था भएसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ ।
चिकित्सकको भनाइमा यो एनेस्थेसियाले बिरामी बेहोस हुनु पर्दैन, जुन भागको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हो त्यही भाग मात्र लाटो बनाइन्छ । ‘बिरामीहरुले मजाले चिकित्सक तथा नर्ससँग कुरा गर्दागर्दै शल्यक्रिया पनि सकिइसकेको हुन्छ’—राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अर्थोप्याडिक सर्जन डा. शागर पन्थी भन्छन् । सम्भवतः यो दाङ जिल्लामै एनेस्थेसियाको पहिलो विकसित एवं अत्याधुनिक प्रविधि हो ।
एनेस्थेसियाका चिकित्सक डा. राजन शाक्यको भनाईमा यो प्रविधिबाट दिइएको एनेस्थेसियाले शल्यक्रिया पछिको पेन व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ, अर्थात् शल्यक्रियापछिको दुखाई कम हुने तथा शल्यक्रियापछि थप दुखाईका औषधीहरु प्रयोग गरिरहनु नपर्ने हुन्छ ।
हातको हाडको शल्यक्रियाका लागि मात्र नभएर यो प्रविधि खुट्टाको शल्यक्रियाका क्रममा पनि उपयोग गर्न सकिने एनेस्थेसिया विशेषज्ञहरुको दाबी छ । सो एनेस्थेसियाको टोलिमा अर्का एनेस्थेसिस्ट डा अञ्जित केसी र डा अजित झाँ रहेका थिए । जुन प्रविधि नेपालमा केही वर्षयता मात्रै प्रयोगमा आउन थालेको हो । यो अर्थो बाहेकका अन्य शल्यक्रियामा समेत प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
शल्यचिकित्सक डा. पन्थीको भनाईमा कन्टिनियस ब्लक प्रविधिबाट एनेस्थेसियाको औषधी मानिसमा दिइरहँदा औषधीको प्रवाह र असरलाई पनि कम्प्यूटरको स्क्रिनमा भिडिओमार्फत् देख्न सकिन्छ । त्यसैले यो कुनै पनि हिसाबले सहज छ । चिरैचिरा परेको कुहिनाका हाडका टुक्राहरु जोड्न कम्तिमा ४ घण्टा लागेको थियो । डा पन्थीको शल्यक्रियाको टिममा डा. जिज्ञाशु प्रधान र डा. विकाश न्यौपाने थिए ।
पछिल्लो समयमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाडजोर्नीका बिरामीहरुको शल्यक्रियाको दर धेरै बृद्धि भएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क अनुसार गएको साउनदेखि फागुन (८ महिना)सम्म मात्रै कम्तिमा ३ सय ४३ जना हाडजोर्नीको समस्या भएकाहरुको शल्यक्रिया भएको छ । निजी अस्पतालभन्दा कम्तिमा आधाभन्दा बढी सस्तो र प्रविधियुक्त शल्यक्रियामा धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको प्रतिष्ठानको अर्थोपेडिक विभागले जनाएको छ । आकस्मिक बिरामीहरुका लागि रात्रिकालीन शल्यक्रिया समेत भइरहेको शल्यक्रिया विभागीय प्रमुख समेत रहेका डा पन्थीले बताएका छन् ।
यो ८ महिनाको अवधिमा करिव आधा समय कोरोनाका कारण लकडाउनको अवस्था समेत थियो । लकडाउन हटेसँगै शल्यक्रियाको दरसँगै जनशक्ति पनि बढेको बताइएको छ । दुर्घटनाबाट हातखुट्टा भाँचिएका जस्तोसुकै समस्याको पनि शल्यक्रिया प्रतिष्ठानमा भइरहेको बताइएको छ । यस अवधिमा जटिल खाले शल्यक्रिया १ सय जना, मध्यम खाले शल्यक्रिया ६३ जना र माइनर ओटी १ सय ८० जनाको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
सम्भवतः बैशाखपछि विशिष्ट खालको सुविधायुक्त भिन्नै अर्थो अप्रेशन थिएटर सञ्चालनमा आउने प्रतिष्ठानले दाबी गरेको छ । त्यससँगै ढाडका शल्यक्रिया पनि यहीँ सम्पन्न हुनसक्ने डा पन्थीले बताएका छन् । यससँगै गर्भवती तथा पत्थरी, पाठेघर, एपेण्डिसाइटिसलगायतका शल्यक्रिया पनि नियमित रुपमा दूरवीन प्रविधिबाट हुँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पनि थपिएका छन् । प्रतिष्ठानकाअनुसार करिब २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठानमा सेवा दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा मानसिक रोग विशेषज्ञ समेत थपिएका छन् । बालरोग, फिजिसियन सेवा, नाक–कान–घाँटी, शल्यचिकित्सा, अर्थो, एनेस्थेसिया, प्रसुती, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, दाँत, आँखालगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन् ।
छाला रोग विशेषज्ञ केही समयदेखि खाली रहे पनि चाँडै छाला रोग विशेषज्ञ आउने पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानमा हरेक साता हाइड्रोसिलको निःशुल्क शल्यक्रिया समेत भइरहेको छ भने ढाड, कम्मरका बिरामीहरुका लागि नियमित फिजियोथेरापी सेवा समेत सञ्चालन भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएसँगै स्तरीय प्रयोगशाला, अस्पतालमै १ सय २८ स्लाइसको सिटी–स्क्यान सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवाहरु सञ्चालन भएसँगै चाँडै एमआरआई सेवा समेत सञ्चालन हुने अन्तिम तयारी भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
कर्ण र शल्यको विवाद
नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पद हस्तान्तरण